Wondershare MobileTrans User Guide - Bido
MobileTrans Guide: Bido
Trial Version vs Full Version:
Ị nwere ike ma na-ekpe ikpe version nke Wondershare MobileTrans ma ọ bụ Full Version. Ka anya na onye ọ bụla nke abụọ a.
Dị ka ị pụrụ eleghị anya maa, na-ekpe ikpe version nwere-agaghị emeli, ha na-agụnye:
• N'ihi nyefe atụmatụ, ị pụrụ nanị nyefee 5 kọntaktị.
• E nweghị ịgba ndị backups na nkwado ndabere na mpaghara atụmatụ ọ bụ ezie na ị pụrụ nanị weghachi mbụ 5 kọntaktị na-ekpe ikpe version.
• Ike ihichapu ochie ekwentị data-adịgide adịgide.
Full Version Uru
Ụfọdụ n'ime uru ndị nke zuru version agụnye:
• Unlimited enyefe n'etiti igwe.
• Unlimited backups na weghachite gị niile data.
• Easily ihichapu gị ochie ekwentị kpamkpam.
Mmalite nkwado na Wondershare MobileTrans dị mfe. Ozugbo ị download Wondershare MobileTrans na mezue nwụnye usoro, ị ga-ahụ ndị na-esonụ bụ isi na windo.
Dabere na ihe ị chọrọ ime, ị nwere ike ahu nagide ọ bụla nke ngalaba ke akpan window. Wondershare MobileTrans Nwere 4 ọrụ. Ka anya na onye ọ bụla-enyere gị aka malitere.
2.1 na ekwentị ekwentị Nyefee
2.2 Back Up ekwentị gị
Ma gụọ 2.3 Weghachi si Backups
Ị nwere ike ịhọrọ a ndabere ebe site na otu nke na-esonụ:
2.4 Ihichapu Your Old ekwentị
Wondershare MobileTrans Enyere iji chebe gị onye data site erasing ha niile si gị ochie Android ekwentị, n'enweghị nsogbu na-adịgide adịgide.
Wondershare MobileTrans - Bido Video Guide
Ọzọ: WinPhone ka iOS